China 30ml Glass Bottle Syrup Filling and Capping Machine maka ndị na -emepụta ọgwụ na ndị na -eweta ọgwụ IVEN
Usoro Mmepụta Sirop
Igwe eji eme syrup IVEN na ịcha mmiri bụ CLQ ultrasonic ịsa, igwe na -ehicha RSM & igwe sterilizing, igwe na -ejuputa DGZ & igwe mkpuchi.
Igwe mmiri sirop na IVEN syrup nwere ike mezue ọrụ ndị a nke ịsa ultrasonic, ịsa ahụ, (chaja ikuku, ihicha & sterilizing nhọrọ), ndochi na ịcha /ịchafụ.
Igwe eji emeju mmiri na ịcha mmiri nke IVEN dabara adaba maka sirop na obere usoro ọgwụ ndị ọzọ, yana igwe na -edenye aha nke nwere ahịrị mmepụta dị mma.
Igwe eji emeju mmiri na iberibe sirop
1.IVEN syrup ndochi na igwe ịcha akwa mejupụtara CLQ ultrasonic ịsa, RSM ihicha & igwe sterilizing, DGZ ndochi & igwe mkpuchi.
2.IVEN igwe na -ejuputa mmiri na igwe ịcha ọkụ nwere ike mezue ọrụ na -asacha nke ultrasonic, flushing, (nchaji ikuku, ihicha & nhọrọ sterilizing), ndochi na ịcha /ịgbagharị.
3.IVEN igwe na -ejuputa mmiri na ịcha akwa dabara adaba maka sirop na obere usoro ọgwụ ndị ọzọ, yana igwe na -edenye aha nke nwere ahịrị mmepụta dị mma.
Usoro igwe eji eme syrup IVEN
Kalama na -abanye n'ọdụ
A na-eji igwe ịsa ahụ ultrasonic hichaa ime na mpụga nke vials ọgwụ na karama cylinder ndị ọzọ.
A na -eji IVEN syrup ndochi na igwe na -ebugharị ụdị agbụ agbụ iji nyefee karama ebe a na -ejuputa wheel, yana njiri mkpọtụ dị ala, enweghị mmetọ ikuku ikuku dị ọcha. Na -ebelata karama na -ada ada, enweghị na ịgbaji.
A na -eji igwe na -ebubata igwe na -ejuputa mmiri sirop na IVEN Syrup na karama nnyefe iji pịa igwe na -ejuputa wheel, yana njiri mkpọtụ dị ala, enweghị mmetọ ikuku ikuku dị ọcha. Na -ebelata karama na -ada ada, enweghị na ịgbaji.
Sistemụ ndochi ihe eji emechi nke IVEN Syrup na-ejuputa na igwe ịpịpụta, na wiil rotary, izizi ọnọdụ dị elu, enwere ike ịhazi isi ọ bụla na-ejuputa iche, nwere ike nweta ọrụ nke karama enweghị ndochi na mgbochi ụfụfụ.
Ọdụ ụgbọ mmiri
Igwe eji emeju mmiri na iberibe syrup IVEN Kachasị mma CAD na -atụgharị mma mma na mpịakọta isi, na -eme mgbanwe dị mma na karama oge adịghị anya, na -arụ ọrụ dị mfe yana okpu ngwa ngwa.
Uru nke igwe eji eme mmiri syrup IVEN
Mmemme njikwa mgbanwe dị mbubata, dị mfe ịrụ ọrụ
Na -ejuputa izi ezi, na -agbagha agbagha ma ghara ịmịpụ
Enweghị karama enweghị ndochi, enweghị okpu ọ bụla
Imebe ihe dị mfe, obere mbibi karama
Ụkpụrụ ọsọ ọsọ enweghị stepless
Na -ejuputa na enweghị mmetọ, jiri ogologo ndụ mee ihe
Ngwa IVEN syrup na -ejuputa na igwe eji eme ihe
Ihe nlele na -egosi:
Igwe ndochi sirop na igwe mkpuchi ihe
Igwe eji emeju mmiri sirop 30 ml
Ahịrị Mmanya Sirop Ejupụtara 100 Ml
Igwe na -ejupụta sirop sirop maka ọgwụ
IVEN Syrup na -ejuputa na igwe eji eme ihe
Karịa nha 2000*1100*2400mm
Mkpokọta ibu 1300 n'arọ
Mkpokọta ike 2.5kw
Na -ejuputa isi 16
Na -ejuputa ziri ezi % 1%
Isi isi 12
Ikwenye ntozu ≥99.8%
Pasent nke mmebi 0.1%
Ihe & Ngwa
Nke gara aga: Igwe sirinji ejupụtarala (gụnye ọgwụ mgbochi)
Osote: Igwe nyocha akpaaka LVP (karama PP)
Herb mmịpụta Production Line (Artemisinin ex ...
Ampoule Machine À Coudre Bernina, Igwe Ampoule À Coudre Led, Igwe Ampoule À Coudre Singer, Igwe eji emejuola agịga, Igwe Njuputa Ejuju Ejupụtara, Disposable ntụtụ & agịga Production Line,